I-AquaSlide | Umkhiqizi wesilayidi samanzi - isakhiwo sokudlala - aquaslide.fr
(+ 33) 960_351 830 (izindleko zekholi yendawo)
Inqola yami yokuthenga
Incwajana Contact ikhotheshini Ukunikezwa spéciales ukwabelana Amaphephandatshana
Inkonzo yamakhasimende Inkampani Ukuzibandakanya kwethu Ihhovisi lokwakhaYiba ngumthengisi Ukulawulwa kokulandelela ukulethwa Indawo yezindaba Ukuqasha kabusha Imininingwane yomuntu Ukucaphuna Contactez-Nous
Indawo yokuhlala echibini
IZINDABA ne-CONCEPT SLIDE
Umzwelo - Ukusebenza - Ukuphepha
CELA INCWADANA YAKHO
UBUHLE BANGASESE lapho lokhu Ukugeleza kwamanzi Imingcele ngokunethezeka nobuchwepheshe. Le kamu linikeza itshe eliyigugu elimangalisayo lapho lihle kakhulu slide emanzini yenza indawo yayo phakathi kwamafulegi wohlelo oluhle kakhulu. Qalisa umkhathi we-AquaSlide bese uthola uhla oluphelele kakhulu lwemishini yasemanzini nemidlalo emnandi.
- Thola ububanzi obubanzi kakhulu be- slide emanzini bese ucela ikhathalogi yethu.
IZILINGANISO NEZILINGANISO zalokhu slide ipaki yamanzi I-AquaSlide. Iphrofayili yayo kanye namavolumu ayo ayinikeza uhlamvu oluhlukile. Ngaphandle kokulingana, lokhu slide ipaki yamanzi kuyisibonakaliso sesikhathi saso futhi ngokuqinisekile yisilinganiso ngokuqamba nokukhulelwa okuhle.
- Cela uhla lwe-AquaSlide ne- its amaslayidi ipaki yamanzi kuma-ergonomics anezikhathi ...
YEDWA NOKUHLULEKILE, ukuhlanganiswa kwe- Isilayidi sephuli iphrojekthi yokuvelela iphonsela inselelo ubuchwepheshe bokwakha obunesimo esimeni sokuzithiba. Ngobuhle bemvelo obungenakuqhathaniswa, lokhu slide pool iveza isifiso sokusuka emasikweni, ngoba ukweqa emasikweni kubalulekile enjabulweni yezingane.
- Qalisa isiginesha ye-AquaSlide nesilayidi sekhwalithi yekhwalithi esivela kumkhiqizi odume umhlaba wonke.
IHLUKANE KAKHULU, Umdlalo wamanzi itshalwe endaweni ebabazekayo, iqhubekisela intsha ebuchosheni obumangalisayo. Ihlaba umxhwele ngokwakhiwa kwayo, lo mdlalo ohlonishwayo wamanzi ubangele ukuzwa futhi ngokushesha waba yindawo yemidlalo yezingane eminingi. Inhlanganisela yamaslayidi wamanzi, izinsimbi ezihlukile I-flip-flop esikhaleni esiphephile, ubufakazi bokubabaza kwabo okukhulu, imicabango yabo yomlingo nokukhohlisa.
- Cela incwajana yakho Jeu emanzini ekujabuliseni okwabiwe.
I-RARETE LIMITED, abakwa-prescribers bakuthwebula lokhu Isakhiwo somdlalo esenziwe ngokwezifiso Izingxube ezingavamile. Idizayinelwe injabulo engenakuqhathaniswa, lesi sakhiwo sokudlala esihle sithuthukiswe ngokunakekelwa okukhulu yihhovisi lethu lokuklama, sivumela izinhlanganisela eziningi ezinikela phezulu kwebanga ekugcineni ezingabizi. Ukuhlanganiswa okuthe xaxa kobuchwepheshe kushiywe kanjalo ekuxakaneni kwezingane ezitotoswayo ...
- Funa eyakho intengo isakhiwo umdlalo for amatende ngemibono emikhulu.
UMBHALO OPHELELE womkhathi nezitayela ezintsha, iIndawo yokudlala yasendlini kuwukubonakaliswa kwentuthuko evumelana ngokuphelele nezidingo zethu zemfundo. Hlola ingcebo yezakhiwo namathuba amaningi wefayela le-indawo yokudlala yasendlini ngempumelelo njengoba ziheha. Njengemidlalo yethu emnandi, i- isakhiwo semidlalo yobungcweti kuvezwa ukukhula kwezingane ezincane.
ITENDA ELISHA, elihlukile nelinguSnobbish, lokhu Umfula wasendle kukuholela ekuphumuleni nasekuphumuleni. Emzileni wabahloli bamazwe, i umfula wasendle ngenkambo ethandekayo futhi exotic ikulindele esimweni sasezulwini. Umthandi wokuhlola nenganekwane, ugqozi alushodi esikhaleni esihle se- Umfula ovilaphayo ou Slow River.
- Thola injabulo emfuleni zasendle, obumangalisayo!
Indawo yokubhukuda eyi-XXL
UMBANDELA WEGUGU walokhu indawo enkulu yokubhukuda echibini ngoba amatende amaka isiginesha yangempela yenqubekela phambili engenakuqhathaniswa. Kwalokhu indawo enkulu yokubhukuda echibini, ake sigxile kubude besikhathi ngokuhamba kwesikhathi. Ngempela, uzolidlulisela enzalweni yakho! Ishiya uphawu lwayo enkundleni yezizwe, i-AquaSlide ifinyelele esicongweni sokuzinikezela ekwakhiweni kwesakhiwo sendawo yokubhukuda.
- Cela igama lesibizo indawo yokubhukuda yokubhukuda I-AquaSlide ngomklamo ophanayo.
EBUHLENI NOKUPHILA kugqamisa Ifenisha yephuli. Imfashini akusewona umzobi wamaphupho kepha kubalulekile. I-AquaSlide, umdali womkhathi nenhlalakahle, ikwenza uthole ifenisha yokubhukuda ebuyekezelwe ukunambitheka kwamakhasimende akho. Iqoqo lethu elimangalisayo lefenisha yephuli liphendula imicabango emikhulu.
- Sesha ifenisha yokubhukuda, izitayela zesitayela nobuhle.
Ukwehluleka ukukhulisa amaphupho akho wokwenza kahle, ake sikhanyise iqembu lethu le-Multi-brand.
Isinyathelo ngaphambi kokuqanjwa okusha, umlingani wethu omuhle kakhulu uthatha iphunga leqiniso ngeminyaka yethu engama-30 yokusebenza.
I-AquaSlide, iqala ukuthuthukisa uhla olubanzi kakhulu lwezinto zokubhukuda eYurophu, i-AquaSlide isebenza njenge umkhiqizi wesilayidi samanzi, i-swimming pool slide, i-water park slide nomdlalo wamanzi.
I-AquaSlide manje inesikhundla esivelele njenge- umkhiqizi we-pool slide France nakwamanye amazwe, iqhubekisela phambili i- isakhiwo sokudlala, indawo yokudlala yasendlini kodwa futhi nomfula wasendle, indawo yokubhukuda echibini nefenisha yechibi.
Ihhovisi lethu lokuklama liguqula isixazululo kumaphrojekthi akho, likusekele esigabeni ngasinye sesifundo sakho futhi lithathe nezibopho zakho.
Ukwazi kwamaqembu ethu ahlukahlukene kuhlangabezana nezidingo namazinga aphakeme kakhulu we isilayidi samanzi sobungcweti kuxhunyaniswe nokuhweba okukhethekile kakhulu.
I-AquaSlide ikuyo yonke imikhakha, amahhotela angaphandle namapaki wamanzi anephothifoliyo ekhomba esikweletini sayo.
Iphrojekthi ngayinye ibonakalisa isikhathi sayo ...
... okwethu kuyinkomba
14 chemin du BOLS - 34150 iPuéchabon (France)
Vula isilayidi samanzi
Isilayidi samanzi amaningi
Isilayidi samanzi esivunguza
Isilayidi samanzi esheshayo
Isilayidi samanzi somndeni
Isilayidi samanzi se-Tube
Isilayidi samanzi esimise okwe-U
Shayela isilayidi samanzi
Isilayidi samanzi esendlini
Slayida ukubeka phansi
Umkhiqizi wesilayidi wamatende
Umkhiqizi wesilayidi samapaki wamanzi
Umkhiqizi wethegi yehhotela
Amanzi slide ividiyo
Izitebhisi neGateway ekhithi
Isilayidi samachibi amancane
Isilayidi samachibi esiqondile
Isilayidi sebhubhu lesilayidi
Isilayidi sesilayidi sesilayidi
Ividiyo yesilayidi sephuli
Ithoyizi lamanzi elincane
Umdlalo wamanzi wezingane
Umdlalo wamanzi wabantu abadala
Ithoyizi lamanzi lochwepheshe
Izakhiwo zemidlalo yasemanzini
Isakhiwo esikhulu samanzi
Isakhiwo esincane samanzi
Ividiyo yomdlalo wamanzi
Izindawo zokudlala zamanzi
Umkhumbi wepirate wamanzi
Ipaki lamanzi lesikebhe esincane
Gcina ipaki lamanzi esiqhingini
Ipaki yamanzi yesikhala
Ipaki lamanzi eRocket
Ipaki lamanzi laseJungle
Ipaki yamanzi yaseChateau
Ipaki yamanzi engaphansi kwamanzi
Isilayidi samanzi esincane
Ividiyo yama-slide wamanzi amancane
Izindawo zokudlala emanzini
Ipaki yejet yamanzi
Inkundla yokudlala eyomile
Imishini yemidlalo yasemanzini
Umenzi wamathoyizi wamanzi
Umkhiqizi wenkundla yokudlala emanzini
Umakhi wesakhiwo samathoyizi wamanzi
Umkhiqizi wesakhiwo samanzi
Umenzi wamathoyizi wamatende
Umkhiqizi womdlalo wepaki yamanzi
Isakhiwo sokudlala esincane
Isakhiwo sokudlala sezingane
Isakhiwo sokudlala sangaphandle
Isakhiwo somdlalo wensimbi
Isakhiwo somdlalo wePlastiki
Isakhiwo somdlalo we-Tubular
Isakhiwo sevidiyo umdlalo wangaphandle
Isakhiwo semidlalo eminingi
Isakhiwo somdlalo wetimu
Isakhiwo sokudlala isifundo
Dlala isakhiwo nge-slide
Dlala isakhiwo sokukhempa
Isakhiwo segeyimu yevidiyo esine-slide
Izinsiza kusebenza zokwakha imidlalo
Dlala umakhi wesakhiwo
Umakhi wesakhiwo sokudlala sezingane
Umakhi wesakhiwo somdlalo wekhempu
Izindawo zokudlala zasendlini
Indawo encane yokudlala yasendlini
Indawo yokudlala yensimbi
Indawo yokudlala epulasitiki
Indawo yokudlala ye-Tubular
Indawo yokudlala yama-slide yasendlini
Indawo yokudlala yemisebenzi eminingi
Indawo yokudlala yetimu
Indawo yokudlala enesilayidi
Inkundla yokudlala yamatende
Inkundla yokudlala ngamabhola
Indawo yokudlala ividiyo ene-slide
Izinto zokudlala zasendlini
Indlu yokudlala yasendlini
Umkhiqizi wepaki yokudlala yasendlini
Umkhiqizi wendawo yokudlala yasendlini
Camping ebaleni lokudlala umenzi
Umenzi wenkundla yokudlala yamahhotela
Iphuli lokubhukuda ledwala lokufakelwa
Umfula wasendle video
Indawo ebanzi yokubhukuda
Indawo ebiyelwe ngamachibi okubhukuda
Ihhotela elishisa ilanga
Isihlalo sokuphumula sehhotela
Isiteji kanye nesiteji
Isakhiwo sokumunca iShock
Isihlalo sokuphakamisa echibini sabakhubazekile
© Copyright 2019 - Aquaslide.fr - Wonke amalungelo agodliwe - Imprint - TOS - Imigomo
IMIZWA EMISHA QALA LAPHA
I-AquaSlide iyisayithi yokuthengisa eku-inthanethi yamahhotela angaphandle, izindawo zasemaholidini nezikhungo zokungcebeleka. Imboni yehhotela, umphakathi ... I-AquaSlide ikulungele ngokuphelele ukukhempa, amachibi okubhukuda kamasipala, kepha namaqembu ezemidlalo, amapaki wamanzi, njll.
Njengamasilayidi ethu epaki yamanzi, amaslayidi echibini lokubhukuda namaslayidi wamanzi wangokwezifiso, thola ukubaluleka kwe- imidlalo yamanzi, izinkundla zokudlala nezakhiwo zokudlala.
Kunwetshwe ibanga elihlonishwayo ukuze kuhlomule imifula yasendle nefenisha yamachibi okubhukuda ngokunwetshwa kulo mkhakha umkhiqizi wesilayidi samanzi eyenzelwe ukukhempa.
I-AquaSlide nehhovisi layo lokuklama, inxusa lephrojekthi yakho, liqinisekisa insizakalo / ukuthembeka / ukuphepha okungcono kakhulu futhi amanani amasilayidi amanzi zekhwalithi enhle.
Thola uhlelo oluvelele lwe-Aquaslide, cela isaphulelo esenzelwe wena noma u-ode online.
Thuthukisa isikhala sakho esimnandi ngokusesha ukunambitheka kwe- aquaslide.fr
Futhi uthole isigaba sethu umenzi wesilayidi ngokwezifiso I-AquaSlide
Isayithi lisebenzisa amakhukhi. Ngokuqhubeka nokusebenzisa indawo ye-AquaSlide noma ngokuchofoza ku- "Isivumelwano", ugunyaza ukusetshenziswa kwamakhukhi, njengoba kukhonjisiwe ku inqubomgomo yobumfihlo